သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သာလျှင် မြန်မာပြည်သူ/သား တို့၏ မိဘအစစ်အမှန် (ပေးစာ - ၁၈၈) ~ Myanmar Forward
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သာလျှင် မြန်မာပြည်သူ/သား တို့၏ မိဘအစစ်အမှန် (ပေးစာ - ၁၈၈)
Posted by drmyochit Friday, October 19, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်တင်နေသော အကြွေးငွေ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဘီလျံ အနက်မှ ဘီလျံ ၃၀၀ အား ကြွေးလျော်ပေး လိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားနိုင်ငံများအပေါ် တင်ရှိနေ သည့် အကြွေးများကိုလည်း ပြန်ဆပ်နိုင်ရန် ကူညီပေးသွားပါအုန်းမည်။ ဒါတွေက ဘယ်သူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်လည်း…? မိဘဆို တာ သားသမီးကို တကယ်ချစ်ရင် အပြစ်ဆိုစရာရှိလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင် အများရှေ့မှာ မ ကောင်းတဲ့ အပြစ် အနာအဆာ အားနည်းချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြီး ရိုက်နှက် ဆုံးမတာဟာ တကယ်ချစ်တာလား? သားသမီးကို အများသူငါရှေ့မှာ အရှက်ရ စေခြင်း၊ နောက်နောင် အမည်ဆိုး တွင်သွားအောင် အရှက်ခွဲလိုက်ခြင်းလား? ဒါကြောင့် သားသမီးကို တကယ်ချစ်ရင် ကောင်းစေချင်ရင် အိမ်ကျမှ ဆုံးမပါ။ အများ သူငါ ရှေ့မှာ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုပြီး အရှက်မခွဲပါနဲ့ လို့ လေ့လာ မှတ်သား ခဲ့ရတယ်။ သားသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အများသူငါရှေ့ထုတ် ဖော်ပြော ဆိုလိုက် ရင် သူ့စိတ်ထဲမှာ ငါ့အဖေ၊ ငါ့အမေ ဟာငါ့ဖက်က မကာကွယ်ပါလား။ သူက၀င်ပြီး အပြစ်တွေပြောနေတယ်။ ငါ့ဖက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါလား။ ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်သွား မယ်။ အရွဲ့တိုက်ချင်စိတ် အရာရာဆိုးတိုင်ပင် ကောင်းတိုင် ပင်စိတ် မရှိတော့ပဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တော့မယ်။ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ ကလေးတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့် စရိုက်တွေကို လိုက်လုပ်တော့မယ်။ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ရင် မိဘက မင်းမကောင်းလို့ မင်းကြောင့် စတဲ့ အပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းတာတွေကို လူေ၇ှ့သူရှေ့ အရှက်ခွဲခံရမဲ့ အတူတူ ဘာပြဿနာ ဖြစ်ဖြစ် မိဘကို ဖွင့်မပြောတော့ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရှင်းတော့မယ်။ ဒါဆို မိသားစု ဆိုတဲ့ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ပျက်စီးသွားရင် ကြားလူ အချောင်သမားဝင်လာမယ်။ လမ်းမှားကို ရောက်တော့မယ်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ မိဘနဲ့တူတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သားသမီးနဲ့တူတဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံမလည်း။ နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီ “ မြန်မာလူမျိုးတွေ အပျင်းကြီးတယ်။ အချင်းချင်း မတည့်ဘူး။ ရိုင်းစိုင်းတယ်။ ပညာမတတ်ဘူး။ အချင်းချင်း မနာလိုဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်နေတာ” စသည်ဖြင့် သားသမီးကို အရှက်ခွဲ နေတဲ့ မိဘနဲ့ မတူတဲ့ မိဘကြောင့် မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ သိမ်ငယ်နေရတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ မိဘကောင်းစိတ်နဲ့ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဖော်ရွေတယ်။ သဘောကောင်း တယ်။ ကူညီချင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ ရိုးသားတယ်၊ သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဖက်က လိုချင်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင် အကာကွယ်ပေးပါ့မယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ညှိုနှိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ လိုအပ်တာတွေ ကတော့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံ သားတွေကိုလည်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွဲခေါ်ယူ သင်ပြပေးပါ။ အဆွေတော်တို့ အတွက် အကျိုး ရှိမဲ့ စီမံကိန်းတွေပါ။ ဒါကြောင့် အဆွေတော်တို့ အတွက်လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင် သေချာပေါက် အကျိုးရှိမယ့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေပါ။ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားခဲ့တော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းလဲ မရောင်းရ သူတို့ပစ္စည်းလဲ မရောင်း စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေလည်း မရှိတော့ အလုပ်သမားတွေလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွား လုပ်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ လည်း လာရောက်ရင်းနှီး မြုပ်နှံစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းစ ကာလမှာ အဖက်ဖက်က လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ အကူညီပေးစေလိုပါတယ်” ဒီလို နိုင်ငံ တကာ အလယ်မှာ ကိုယ့်သားသမီးတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပညာ အစစ ဘက်စုံ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးအောင် မိဘကောင်းစိတ်နဲ့ ကြိုးစားတယ်။ အပြစ်အနာအဆာ တွေကို အိမ်ကျမှ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဆုံးမပြီး ပညာတွေ ကြိုးစားသင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်လာပါ။ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ရာ ထင်းစည်းလေး ချိုးပြနေ ရတယ်။ ကိုရီးယားတွေလို ၀ိရိယ ရှိကြ။ သူများ တိုးတက်သလို တိုးတက်အောင် ကြိုးစား။ အလုပ် လက်မဲ့ပေမယ့် ထမင်းမငတ်တာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာပဲ ရှိတယ်။ ဒီလို အရိုးပေါ် အရွက်ဖုံးပြီး ကောင်းတာလေးတွေ ရွေးချီးမွမ်း ကိုယ့်လူကိုယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆုံးမ မှ တကယ်သားသမီးကို ချစ်တဲ့ မိဘပါ။ မိဘကောင်းရင် သားသမီးက မိကောင်းဖခင် သားသမီးဖြစ်လာမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်မိဘက ကိုယ့် အပေါ် တကယ်ကောင်းတာ လည်း စေတနာ တကယ်ရှိတာလည်း သားသမီးတွေ စဉ်းစားကြပါ။